News Collection: छोराछोरी राख्ने नेताको छाँट
छोराछोरी राख्ने नेताको छाँट
काठमाडौं। गल्ती नै गल्तीले भरिएको सर्टिफिकेट लिन मलेसिया पुगेका माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई त्यहा कार्यरत नेपाली पत्रकारले यस्ता प्रश्न सोधे कि उनले बीचैमा जंगिएर भन्नुपर्योय– असाध्यै नेगेटिभ प्रश्न मात्रै सोध्नुभो, सकारात्मक प्रश्न पनि सोध्नोस् न! मलेसियामा पत्रकारले उनलाई सोधेका थिए– तपाईं जहिले पनि विदेश जादाखेरि किन श्रीमती र छोरालाई लिएर हिड्नुहुन्छ?
हुन पनि पुरानो नेपाल भत्काएर नया बनाउने सपनामा दसौँ हजार नेपाली छोराछोरीले रगत बगाएपछि सत्तामा पुगेको माओवादी नेतृत्वमा परिवारवाद दह्रैसित फस्टाएको छ। तपाईंहरूले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई भेट्नुपर्योा भने तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रलाई जसरी बिन्तीपत्र हाल्नु पर्दैन। न त कुनै पशुपतिभक्त महर्जन नामको नाता नपर्ने सचिवमार्फत नै जानुपर्छ। बरु प्रचण्ड (जसलाई हेडक्वार्टर पनि भन्ने गरिन्छ) लाई भेट्नुपर्योल भने तपाईंले या त उनका एक मात्र छोरा प्रकाश दाहाललाई फोन गर्नुपर्छ, या भतिजा समिर दाहाललाई। पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन वैद्य (किरण) लाई कुनै पनि विदेशी वा स्वदेशी शुभेच्छुकले टेलिफोन गर्नुपर्योक वा भेट्नुपर्योण भने वैद्यपुत्री चेतनासित 'मुलाकात' नगरी खैरियतै छैन। हिजो रक्षामन्त्री भएका रामबहादुर थापा बादललाई तत्कालीन सेनापति रुक्मांगद कटवालले सम्पर्क गर्नुपर्यो् भने पनि बादलका छोरा प्रतीक थापासित सम्पर्क गर्नैपर्थ्याे। अहिले पनि माओवादी महासचिव बादललाई देशभरिबाट कुनै नेता–कार्यकर्ताले सम्पर्क गर्दा बादलपुत्र प्रतीक थापामगरलाई लालसलाम भन्नैपर्छ। अर्का उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ (प्रकाश) ले पनि आ136नै छोरालाई वा छोरीलाई पिए राख्ने थिए होलान्, तर समस्या के छ भने उनको हालसम्म विवाह भएको छैन। त्यसैले प्रकाशले न्हुच्छेमान महर्जनलाई पिए राखेका छन्। प्रचण्डका पूर्व सम्धी एवं नेता पोष्टबहादुर बोगटी (दिवाकर) ले पनि आफ्नी छोरी प्रभा बोगटीलाई जनयुद्धकालदेखि नै निजी सचिव राखेका थिए। युद्धकालमा हेडक्वार्टरसित हटलाइन सम्पर्क गर्दा प्रभा र प्रकाशबीच माया बस्यो र विवाह पनि भयो, अनि एक वर्ष नबित्दै सम्बन्धविच्छेद पनि भयो। यतिवेला छोरीलाई सजिलो पार्न दिवाकरले भतिजो किरण बोगटीलाई पिए बनाएका छन्। पार्टीमा क्रान्तिकारी धारका नेताको रूपमा चिनिने सिपी गजुरेलले पनि सहिदका छोराछोरी वा दुःख पाएका कार्यकर्तालाई पिए राखेका छैनन्। उनले युरोप पढेर आएका छोरा सञ्जीवलाई आफ्नो टेलिफोन रिसिभ गर्ने पिए बनाएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय विभाग हेर्ने कृष्णबहादुर महराले पनि छोरा राहुललाई पिए राखेका छन्। देव गुरुङकी पिए कुसुम गुरुङ पनि नाताले उनकी भतिजी हुन्। त्यसैगरी, जनसेनाका कमान्डर नन्दकिशोर पुन (पासाङ) ले समेत 'फेमस' नाम गरेका छोरालाई पिए राखेका छन्। मिलाएर खान पाउदा माओवादी पनि कम रहेनछन् भन्ने कुरा सभासद्हरूले नियुक्त गर्ने पिएमा आफन्तको लामो सूचीलाई हेर्दाखेरि पनि स्पष्ट हुन्छ। स्रोतका अनुसार, अधिकांश सभासद्ले कांग्रेस, एमाले र अन्य दलका सांसदले जस्तै परिवारका सदस्यलाई राखी 'मिलाएर' खाने गरेका छन्। माओवादी शीर्ष नेताहरूमध्ये उपाध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई भने अपवादका रूपमा रहेका छन्। उनले चाहि जनयुद्धकालदेखि नै नाताबाहिरका भक्ति पाण्डे (चाचाजी) का छोरा विश्वदीप पाण्डेलाई पिए राखेका छन्। अन्य नेताका छोराछोरीले भन्दा धेरै पढेकी बाबुरामपुत्री मानुषी भट्टराईचाहि 'झिल्को त्रैमासिक' चलाउछिन्। पछि थाहा पाउनुहुन्छ–प्रचण्ड प्रचण्डले नेगेटिभ प्रश्न सोध्नुभयो भन्दाभन्दै मलेसियामा एकजना पत्रकारले उनलाई थप प्रश्न गरे– 'नेगेटिभभन्दा पनि तपाईं अहिले मलेसियामा छोरा लिएर आउनुभएको छ, प्रचण्डले परिवार मात्रै हेर्छ भन्छन् नि मान्छेहरू?' प्रचण्डले यो प्रश्नको जवाफ फर्काएनन्, बरु यसो भने– 'यसका (परिवारलाई लिएर हिाड्नुका) कारण छन्, ती कारण पछि थाहा हुादै जानेछन्। तपाईंहरूका सबै प्रश्नको जवाफ दिइरहन आवश्यक छैन। मलाई विश्वास नगरे केही छैन। पहिले प्रचण्ड जे थियो, अहिले पनि त्यही हो, हिजो किन मलाई विश्वास गरे? आज किन गर्दैनन्?' त्यसो त मलेसिया गएका प्रचण्डले राधाकृष्ण मैनालीलाई 'बिचरा' भनेका छन्। उनले पत्रकारसित भने– बिचरा १४/१५ वर्ष कम्युनिस्ट भएर जेल बसे। एमालेमा बसेर २/३ पटक मन्त्रीसमेत भए। कुरा बुझ्नुभयो त? अब लास्टमा राजाको वेलामा शान्ति हुन्छ कि भनेर गल्ती गरेा भन्दै सार्वजनिक रूपमा माफी मागेपछि त्यसलाई राजावादी भन्न मिल्दैन, नीति र सिद्धान्तलाई हेर्नुपर्छ। राजावादी पनि हिजोका नेपाली नै हुन्।